Yintoni Abarhwebi ekufuneka bayazi malunga ne-HTML5 | Martech Zone
Yintoni ekufuneka bayazi ngeNtengiso malunga ne-HTML5
NgoMvulo, Julayi 2, 2012 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
I-HTML5 inesithembiso esikhulu sokwenza umxholo ufumaneke nakwesiphi na isixhobo esisebenza ngewebhu… ukuba abantu bangahlaziya izikhangeli zabo kwiinguqulelo zamva nje. Umbuzo ngowokuba ingaba lixesha lokuba umbutho wakho uqalise ukuphuhlisa iindawo zakho kwi-HTML5 kwaye kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuphinda utyale imali ukwenza njalo. Uberflip Ubeke ndawonye izibalo ezifanelekileyo kwi-HMTL5 ukunceda abathengisi ekwenzeni eso sigqibo.
I-HTML5 inika abathengisi amandla okuhambisa umxholo kumaqonga amaninzi (idesktop, ithebhulethi, i-smartphone) ngexabiso eliphantsi kakhulu.
Njenge teknoloji esekwe kwisikhangeli, ii-apps zewebhu ze-HTML5 zinokwakhiwa kube kanye kwaye ziqhubeke phantse nasiphi na isixhobo; phantse iipesenti ezingama-70 zabakhangeli baxhasa olu lwimi lwenkqubo.
Ii -apps ze-HTML5 zibonelela phantse ngenqanaba elifanayo lokunxibelelana kunye nokuziphatha okufana neapps njengeeapps zemveli
I-HTML5 isetyenziswa phantse ngama-50% yabaphuhlisi, kwaye kulindeleke ukuba ikhule iye kuma-80% kwiminyaka emi-3 ezayo
Ukuqhuba ukuzibandakanya neewijethi ezivela kwiWidgetbox
Izilo ezimhlophe zeHat ze-SEO